ဝန်ထမ်းများ၏ စိတ်ဓာတ်နှင့် လုပ်အားပိုင်း ဆိုင်ရာ တိုးတက် ကောင်းမွန်စေဖို့အတွက် အကျိုးခံစားခွင့်များ - JustLogin
“မုန်လာဥတစ်ခု” (ဆုလာဒ်) က “တုတ်ချောင်းတစ်ချောင်း” (ပြစ်ဒဏ်) ထပ်တော့ ပိုကောင်းပါတယ် ဆိုတဲ့ ဆိုရိုးစကားတစ်ခု ရှိပါတယ်။ လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေအရ လုပ်မိတဲ့အမှားတွေအတွက် အမြဲအပြစ်တွေပဲ အပြောခံနေရတဲ့ ဝန်ထမ်းထက် လုပ်နိုင်ခဲ့တာတွေအပေါ် အမြဲချီးကျူးခံရတဲ့ ဝန်ထမ်းက အလုပ်ကိုသေသေချာချာနဲ့ အချိန်အကြာကြီး ကောင်းကောင်းမွန်မွန် လုပ်နိုင်တာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုနည်းလမ်းကို ဝန်ထမ်းတွေပေါ် အသုံးချတာကလည်း ထိရောက်မှု ရှိပါတယ်။ ဒီလိုဆုလာဘ်တွေ ပေးတာက လုပ်ငန်းရှေ့ဆက်ဖို့အတွက် ရေရှည်အကျိုးရှိစေမှာပါ။ “ဈေးကွက်တစ်ခုမှာ နေရာရပြီး အနိုင်ရဖို့အတွက် ဆိုရင် အလုပ်ခွင်မှာပါ အောင်မြင်မှုရရှိဖို့ လိုအပ်တယ်” လို့ Campbell Soup ရဲ့ CEO တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Doug Conant က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဝန်ထမ်းတွေရသင့်ရထိုက်တဲ့ အကျိုးခံစားခွင့်တွေကို ခွဲခြားမပြခင်မှာ ကုမ္ပဏီတွေမှာ ထောက်ပံ့ပေးလေ့ရှိတဲ့ အာမခံကြေး (ကျန်းမာရေးအာမခံ၊ အသက်အာမခံ၊ ဆေးဝါးအာမခံ၊ အခြား)၊ GYM အသင်းဝင်ခွင့် ဒါမှမဟုတ် Discount တွေ နဲ့ သွားလာစရိတ် ထောက်ပံ့ပေးတာ စတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်လေးတွေကို ဥပမာအနေနဲ့ ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီတွေက ထောက်ပံ့ပေးတဲ့ ဒီလိုကိစ္စ တွေကို ဝန်ထမ်းတော်တော်များများအနေနဲ့ကတော့ စိတ်ကျေနပ်မှုတွေ ရှိကြပါတယ်။
· အကြောင်းအရာ #၁: ဝန်ထမ်းများ၏ အကျိုးအမြတ် = အာမခံကြေး
ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ အကျိုးအမြတ်ဆိုတာကို အလုပ်ရှင်တွေလုပ်ခိုင်းတဲ့ အလုပ်တွေအတွက် ရလာဒ်အနေနဲ့ ပြန်လည် ပေးအပ်တာ ဆိုပြီးတော့ နားလည်မှုလွဲ နေကြပါတယ်။ ဒါက တစ်ကယ်တော့ မမှန်ပါဘူး။ အပေါ်မှာ ပြောပြထားခဲ့သလိုပဲ တော်တော်များများ မသိကြသေးတဲ့ အကျိုးအမြတ်တွေ ဆိုတာလည်း ရှိပါသေးတယ်။ အာမခံ တွေကို အကျိုးခံစားခွင့် တစ်ခုအနေနဲ့ ပေးတာက ဘာမှမရတာ ထက်စာရင်တော့ ကောင်းပါသေးတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဝန်ထမ်းတွေကို အကျိုးခံစားခွင့်ပေးတာတွေက နာမည်ကြီး ဆေးအမျိုးအစားတွေအစား ထွေထွေထူးထူး မဖော်ပြတော့ပဲ သောက်ရမယ့် ဆေးအညွှန်း တွေလောက်ပဲ အကန့်အသတ်နဲ့ နည်းနည်းဖော်ပြရင် ဖော်ပြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ်မကောင်းတဲ့ အချက်တစ်ခုကတော့ အကျိုးခံစားခွင့် ပေးမယ့် ကိစ္စရပ်တွေအတွက် အဓိကကျတဲ့ ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ရဲ့ အရည်အချင်းဖြစ်ပါတယ်။ ပိုပြီးတော့သုံးလေလေ၊ ပြန်ရနိုင်မယ့် ပမာဏကလည်း များလေလေ ဖြစ်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေက အလုပ်ရှင်တစ်ယောက်ဆိုရင်တော့ ဒီတစ်ချက်ကို မှတ်သား ထားသင့်ပါတယ်။
· အကြောင်းအရာ #၂: ဝန်ထမ်းများ၏ အကျိုးအမြတ် = အချိန်ကုန်သက်သာခြင်းနှင့် ကုန်ကျစာရိတ်
ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ အကျိုးခံစားခွင့် ဆိုတာမျိုးကလည်း ကုမ္ပဏီရဲ့ ကုန်ကျစရိတ်တစ်မျိုးပါပဲ ပြီးတော့ တစ်ချို့ကုမ္ပဏီတွေက ကုန်ကျစရိတ် သက်သာဖို့အတွက် ကားပါကင်ထားခလိုမျိုး ကုန်ကျစရိတ်တွေကို စရိတ်ချွေတာတဲ့အနေနဲ့ စိုက်ထုတ်ပေးတာ မျိုးတွေ ရှိပါတယ်။ ဝန်ထမ်းနည်းတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေအတွက်ကတော့ ဒီလိုနည်းလမ်းက ထိရောက်မှု ရှိတယ်ဆိုပေမယ့် ဝန်ထမ်းများတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေအတွက်ကတော့ ကုန်ကျစရိတ် ပိုများလာနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ထိတော့မလိုအပ်ပါဘူး အလုပ်ရှင်တွေအနေနဲ့ ဒီဂျစ်တယ်နဲ့ နည်းပညာ ကိုသေသေချာချာ အသုံးချသင့် ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် HR နဲ့ Management Information System report တွေအတွက် အချက်အလက်စီစစ်ရတော့မယ့် အချိန်မျိုးမှာ အချက်အလက်တွေကို တစ်နေရာထဲမှာ စုစည်းထားတာမျိုးကလည်း အခက်တွေ့နိုင်စေပါတယ်။ ပြန်ပြင်ရမယ့် လုပ်ငန်း အစအဆုံးက အချိန်လည်း တော်တော် ပေးရနိုင်တဲ့အပြင် အမှားမခံတဲ့ လစာစာရင်းလို အချက်အလက်တွေ အတွက် လုံခြုံရေးတွေ ကလည်း နည်းလွန်းပါတယ်။
ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ အကျိုးခံစားခွင့်ရဖို့က ဘာကြောင့်အရေးပါရတာလဲ?
· ဝန်ထမ်းများ ဆက်လက်ခန့်အပ်ထားခြင်း
Gallup ရဲ့ နိုင်ငံပေါင်း ၇၃ နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ စက်မှုလုပ်ငန်း ၄၉ ခုက အဖွဲ့အစည်း ၂၃၀ မှာ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ဝန်ထမ်းပေါင်း ၁.၈ သန်းကို လေ့လာချက် အရ ဝန်ထမ်းတွေကို ပြန်ခန့်အပ်ထားဖို့အတွက် ကုန်ကျစရိတ်တွေ သိသိသာသာရှိကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။ ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့လည်း အလုပ်မလုပ်တော့တဲ့ ဝန်ထမ်းတွေအတွက် တစ်နှစ်ကို ၂.၆ မီလီယံလောက် သုံးစွဲကြရပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးပါပဲ ဝန်ထမ်းတွေအများကြီး ခန့်အပ်ထားတာကလည်း ကုမ္ပဏီအတွက် အကျိုးရလာဒ်တွေ အများကြီး ရရှိစေပါတယ်။ ရောင်းအား ၃၀% အထိမြင့်တက်လာခြင်း၊ အမြတ်အစွမ်း ၂၁% တက်လာခြင်း၊ ဝင်ငွေရရှိမှု ၁၁၅% စီတိုးတက်လာခြင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်ပျက်ကွက်မှု ၄၁% ရာခို်င်နှုန်း လျော့ကျလာခြင်း၊ ကြိးစားကြတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေ ၅၉% လျော့ကျ လာမယ်၊ ပဋိပက္ခဖြစ်နိုင်ချေ ၇၀% လောက် လျော့ကျ လာပြီးတော့ အမှားတွေကလည်း ၄၀% လောက် နည်းပါးလာပါတယ်။
· ဝန်ထမ်းများ၏ စိတ်ခွန်အားမြင့်တင်ပေးခြင်း
သိပ္ပံလေ့လာချက်တွေပြုလုပ်နေတာမဟုတ်ပါဘူး စိတ်ခွန်အားပေးတာ အားနည်းရင်တော့ လုပ်ငန်းတိုးတက်မှု နှေးကွေးနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Market Tools ကပြုလုပ်တဲ့ စစ်တမ်းတစ်ခုအရ ၇၆% သော ဝန်ထမ်းတွေဟာ သူတို့ခံစားရတဲ့ အကျိုးခံစားခွင့်နဲ့ အလုပ်ရှင်တွေဆီက ရရှိတာတွေအတွက် ကျေနပ်မှု မရှိကြပါဘူး။ နောက်ပြီး Bersin Group ရဲ့ လေ့လာချက် မှာလည်း ဝန်ထမ်း ၁၀ ယောက်မှာ ၈ ယောက်လောက်က အလုပ်ရှင်တွေရဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုတွေက ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ လုပ်ရည်ကိုင်ရည်ကို ပိုကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ ခွန်အားပေးတာလည်း အားနည်းတယ်ဖို့ ဖော်ပြ ထားကြပါတယ်။ ကောင်းမွန်တဲ့အကျိုးခံစားခွင့်တွေကြောင့် အလုပ်မှာ စိတ်ကျေနပ် အားရမှုရှိတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေက သူတို့ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပိုကောင်းအောင်လို့ ကြိုးစားကြပါလိမ့်မယ်။
· ငွေရေးကြေးရေး ဖိအားများ လျှော့ချခြင်း
ငွေရေးကြေးရေးကြောင့် စိတ်ဖိစီးမှုဒဏ်ခံနေရတဲ့ ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ဟာ အလုပ်ခွင်မှာလည်း ဒီဒဏ်ကို ငါးဆထပ်ပိုပြီးတော့ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ဝန်ထမ်းတွေဟာ တစ်လမှာ ၁၃ နာရီလောက်က သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ငွေရေးကြေးရေးကိစ္စတွေကိုပဲ စိုးရိမ်ပူပန်နေကြရပြီးတော့ ဒီလိုကိစ္စတွေအတွက် စုစုပေါင်း လုပ်ခလစာအတွက် ၅% လောက်ထိ ဆုံးရှုံးမှုတွေ ရှိလာပါတယ်။ အလုပ်ခွင်မှာ ဝန်ထမ်းတွေအတွက် အဆင်ပြေစေမယ့် အကျိုးခံစားခွင့်တွေ ထောက်ပံ့ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ ငွေရေးကြေးရေး စိတ်ပူစရာမလိုတော့ဘဲ အလုပ်ခွင်မှာ စိတ်ပြန့်လွင့်တာတွေ နည်းလာမယ်၊ အလုပ်မှာ ၆၀% လောက်ပိုပျော်ပြီး တိုးတက်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ အကျိုးခံစားခွင့်နဲ့ပက်သက်ပြီး အလုပ်ရှင်တွေအနေနဲ့ ဘာလုပ်နိုင်မလဲ?
တစ်ချက်ခုတ်နှစ်ချက်ပြတ်စေနိုင်တဲ့ အဖက်ဖက်ကပြည့်စုံတဲ့ အကျိုးခံစားခွင့်မျိုးဆိုရင်တော့ ကုမ္ပဏီက ဝန်ထမ်း တော်တော် များများလည်း စိတ်ကျေနပ်မှု ရနိုင်သလို သူတို့ရဲ့ ငွေရေးကြေးရေးပြဿနာတွေကိုလည်း ပြေလည်စေနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကို အကျိုးခံစားခွင့်တန်းတူ ပေးမယ့်အစား မတူညီတဲ့အခွင့်အရေးတွေ ပေးတာမျိုးက ပိုထိရောက် စေနိုင်သလို အချိန်နဲ့အမျှလိုအပ်တဲ့ အကျိုးခံစားခွင့်အမျိုးမျိုး ပေးသင့်ပါတယ်။ ဥပမာအနေနဲ့ အလုပ်ရှင်တွေဟာ Xoxoday လို ဒီဂျစ်တယ် ပလက်ဖောင်းတွေကို ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ အကျိုးခံစားခွင့်တွေပေးဖို့ သုံးနိုင်ပြီးတော့ GYM လက်မှတ်၊ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ကုန်တိုက်မှာ ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ ဈေးဝယ်ထွက်ခွင့်၊ သတ်မှတ်ထားတဲ့ F&B ဆိုင်တွေမှာဝယ်ယူခွင့်နဲ့ Netflix ဝယ်ဖို့ ဝန်ဆောင်မှုတွေ လိုမျိုး အကျိုးခံစားခွင့်အမျိုးမျိုးကို ပေးထားနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုအကျိုးခံစားခွင့်ပေးထားတာတွေက ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ လစာကိုလည်း ပိုများလာစေပါတယ်။
ဒီလိုအကျိုးခံစားခွင့်တွေကလည်း ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ငွေရေးကြေးရေးပြဿနာတွေကို ကောင်းကောင်းကြီး ဖြေရှင်း နိုင်ပါသေးတယ်။ ငွေရေးကြေးရေး ကောင်းမွန်နေဖို့ဆိုတာက ဘာကိုပြောချင်တာလဲ? ဒါက လူတစ်ယောက်နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ရေတိုရေရှည်အစီအစဉ်ချထားရမယ့် ငွေကြေးသုံးစွဲမှုတွေ၊ ပိုက်ဆံကို အကျိုးရှိရှိ အသုံးချဖို့တွေ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု သဘောတရား တွေကို နားလည်မှုတွေ၊ ငွေကြေးစုဆောင်းထားတာတွေနဲ့ ရုတ်တရက် ကြုံတွေ့လာနိုင်တဲ့ ငွေကြေးဆုံးရှုံးမှုတွေ လိုမျိုး ငွေရေးကြေးရေးပြဿနာတွေ ကိုဆိုလိုတာပါ။ ငွေရေးကြေးရေး ကောင်းမွန်ဖို့ ဆိုတာကလည်း ဝန်ထမ်းရဲ့ အခြေခံကျပြီးတော့ သူတို့ရဲ့ လုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းတွေ တိုးတက်လာစေတဲ့ အချက်တစ်ခုလည်း ဖြစ်နေပါသေးတယ်။ ငွေရေးကြေးရေး ကောင်းမွန်တယ် ဆိုတာမျိုးက ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ အကျိုးခံစားခွင့်နဲ့ ဘယ်လိုမျိုး သက်ရောက်မှုရှိနေတာလဲ? ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှု သင်တန်းတွေနဲ့ Workshop တွေပြုလုပ်စီမံပေးတာ၊ တာဝန်ပေးတဲ့ အလုပ်ပေါ်မူတည်ပြိး လစာနှုန်းထားခွဲထားတာ၊ ရလာတဲ့အကျိုးအမြတ်တွေကို Bonus အနေနဲ့ပြန်ပေးတာနဲ့ ချေးငွေချေးနိုင်တာမျိုးတွေကအစ အဖက်ဖက်က နည်းလမ်းမျိုးတွေကို ဝန်ထမ်းတွေ လိုအပ်ပါတယ်။